Turkey: Kormeerka iyo Baaritaanada la xiriira COVID-19 oo la kordhinayo. - Tilmaan Media
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Turkiga ayaa soo saartay amar ku socdo gobonatoorayaasha gobollada Turkiga, kaasoo ah in aad la xoojiyo kantaroolka iyo kormeerka la xiriira xanuunka COVID-19. Amarkaan ayaa soo baxay kadib markii kiisaska cusub ee maalinlaha ahi kahoos mari waayeen 1,000 maalinkii.
Baaritaano isku wakhti ah ayay ciidamada amaanku samayn doonaan si dadka loogu khasbo in ay xidhaan maskiyada una dhawraan kala fogaanshaha. Badanaa gobollada dalka ayaa waxay khassab ka dhigeen xirashada maskiga, waxaana lasoo rogay ganaax gaaraya TL 900 ($131) oo uu mudanayo qofka aan xiran. Laakiin in la arko dad aan xirnayn maski waa arrin caadi ka ah goboladda dalka.
Amraka wasaaradda ayaa faraya si loo ogaado heerka xirashada maskiga iyo kala fogaanshada dadka in maalinka Arbacada kormeer lagu sameeyo dhamaan suuqyada, masaajidda, gaadiidka dadwaynaha, timajarayaasha, meelaha jirka lagu dhiso, moolasha iyo maqaaxiyaha.
Sida uu bartiisa twitterkiisa ku qoray wasiirka caafimaadka Fahrettin Koca, Turkiga ayaa diiwaangaliyay 1,086 kiis oo COVID-19 ah oo cusub maalinkii Isniinta oo kaliya, halka ay u dhinteen 16 qof, waxayna wadarta guud ee dadka u dhintay COVID-19 ay noqonaysaa 5,241 oo qof. Sidoo kale wadarta guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa gaaray 206,844.